ဒဿ and the Beast | Layma's World
ဒဿ and the Beast
Posted on December 25, 2008 by layma
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး မြန်မာတစ်ဝက် ဘိုတစ်ဝက်နဲ့လေးမ ရူးများရူးသွားပြီလားလို့သက်သက်ညှာညှာ တွေးလိုက်ကြမလား … ။ ဒီနေရာက နံပါတ် ၈ စီမံကိန်းကြီး တကယ် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပြီလားလို့အပြေးအလွှား သတင်းမေးကြမလား … ။ မတွေးကြ.. မမေးကြပါနဲ့ ..။ တစ်ခါတည်း ရှင်းပါမယ်…။ ဒဿကို Datha.. Dadtha.. Deatha.. လို့မရေးချင်လို့ ဒဿကို ဒဿ လို့ ပဲ ရေးလိုက်တာပါ … ။
The Beast ကတော့ Beauty and the Beast က Beast ကိုပြောတာပါ…။ မြန်မာပြန်စာအုပ်တွေမှာ ကိုရုပ်ဆိုးလို့ကိုယ်စားပြုရေးသားထားပေမယ့် လေးမမျက်စိထဲမှာတော့ ခြင်္သေ့ကြီးလို့ ပဲ မြင်ပါတယ်…။ ကိုရုပ်ဆိုးပဲခေါ်ခေါ် .. ခြင်္သေ့ကြီးလို့ ပဲ ပြောပြော.. ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာ အောင်ပွဲ ခံနိုင်ခဲ့တဲ့ the Beast ဖြစ်ပါတယ် …။ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ် … Walt Disney ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင် တစ်ပုဒ် … ပုံပြင်စာအုပ်တွေထဲမှာ အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် … ဖြစ်တဲ့ Beauty and the Beast ကို လူတိုင်းလိုလို ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ…။ အဖိုးတန် နှင်းဆီတစ်ပွင့်အတွက်နဲ့တောအုပ်ထဲက ကြမ်းတမ်းပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သားရဲကောင်ကြီးရဲ့ … ရဲတိုက်အိုကြီးမှာ လာနေရတဲ့ မိန်းမလှလေး နဲ့သားရဲကောင်ကြီးတို့မေတ္တာသက်ဝင်သွားကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်…။
ဒီဇာတ်လမ်းက ဘာကိုရည်ရွယ်ပါသလဲ…။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြမ်းတမ်းရုပ်ဆိုးသူဖြစ်ပါစေ .. မိန်းမလှလေးရဲ့ အချစ်ကို ရနိုင်တယ်လို့ရုပ်ဆိုးသူတွေ အားမငယ်ရအောင် ဘက်လိုက်ထားတာလား…။ မိန်းမလှလေးရဲ့ အချစ်ကိုရတာနဲ့ ကျိန်စာပျယ်သွားတဲ့ မင်းသားချောလေး ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီး … အားငယ်ရမှာလား…။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ တဲ့ အချစ်ကို ဘယ်သူမဆို ခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာလား…။ အချစ်ဟာ အပေးရှိရင် အရ လည်းရှိတယ်လို့နားလည်ရမှာလား…။ ဘာပဲပြောပြော ငယ်စဉ်ကတော့ အင်မတန် စိတ်ကူးယဉ်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … ။
ရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်… ကြမ်းတမ်း ကြသူချင်းအတူတူမှာ ရာမ ဇာတ်တော်ထဲက ဒဿကတော့ ကံမကောင်းခဲ့ရှာပါဘူး…။ ဒဿလည်း ဘုရင်ဖြစ်တယ်… ဒဿလည်း ချစ်တတ်တယ်… ဒါပေမယ့် အချစ်ကံ ခေတဲ့ ဒဿခမျာမှာ သီတာ ရဲ့ အချစ်ကို မရခဲ့ရှာပါဘူး…။ ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ မင်းသားလေးမှ မဟုတ်ဘဲ လို့အတွန့် တက်ရမလား…။ သူများမိန်းမကို ခိုးတာကိုးလို့ ပဲ တွေးပေးရမလား…။ ဒဿဂီရိ ဘာလို့အချစ်ရှုံးသမားဖြစ်တာလဲ…။ ဒဿနဲ့the Beast က ပုံစံချင်းဆင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေ ဖြစ်ပေမယ့် ရလာဒ်ချင်း ဆန့် ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာ ဘာလို့ လဲ …။ အရှေ့ တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း စာရေးဆရာတွေရဲ့ ခံယူချက်… အတွေးအမြင်နဲ့နှလုံးသားချင်းကွာခြားလို့များလား…။
အား..လား…လား… အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာ စဉ်းစားခန်းဖွင့်နေလိုက်တာ .. ခေါင်းတောင်အတော်ပူသွားပြီ… သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်လောက် ဖွင့်လိုက်ဦးမယ်….။
“ ဘီလူးခေါင်းလေးနဲ့ချစ်သူလေး မောင်ရယ်…. မင်းသားလေးလို့… မှတ်ထင်ထားပါတယ်… လိမ်တယ်… ညာတယ်… အချစ်ကို ကစားတယ်…. ညာနေတာကို သိရက်သားနဲ့ ….”
အင်း… သီချင်းနားထောင်လဲ ဘီလူးနဲ့မလွတ်ပါလား…။ တကယ့် လူ့ လောကမှာ ကျိန်စာမိထားတဲ့ Beast တွေလည်း မတွေ့ ဖူးဘူး… ခေါင်းဆယ်လုံးနဲ့ဒဿလည်း မရှိဘူး…။ မင်းသားခေါင်းဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူးတွေပဲများနေတယ် ဆိုတော့ မခိုင်ရဲ့ သီချင်းက တကယ့်လောကနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးသီချင်းပဲ … လို့ကောက်ချက်ဆွဲရင်း မီးပျက်လိုက်ပါတယ်ရှင်… ။ ။
Filed under: Thinkings from story |
« ယနေ့ရန်ကုန် ( ၂ ) စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း »
သားကြွက်, on December 25, 2008 at 9:57 pm said:
မင်းသားခေါင်းဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူးမဟုတ်ပါ ကြောင်ခေါင်းတော့ ဆောင်းထားတယ် 😛 ပြောချင်တာလေးတွေကို မြှုပ်ကွက်နဲ့ရေးတက်တဲ့ ဂိုဏ်ချုပ်ရဲ့ စာတစ်ချို့က မွှေးနှောက် အရေသောက်နေကျပေမယ့် မသိသေးတာ ညံ့တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောရမယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်လို့ကောင်း ဗဟုသုတရတာတော့ အမှန်ပဲ ကျေးဇူးပါ ။
မွန်, on December 25, 2008 at 10:11 pm said:
မမရေ ယနေ့ရန်ကုန်တို့မှာ ကောမန့်ပွတ်တာ ဘယ်လိုမှပွတ်မရဘူး အခုထပ်ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်
မမပြောသလိုပဲ စာရေးဆရာတွေရဲ့ အာဘော်ကွာခြားလို့လားမသိဘူး
မွန်တို့စိတ်ထဲမှာ the beastကြီးကို ချစ်တယ် သနားတယ် ဒဿကိုတော့မုန်းတယ် ရွံတယ်လေ
ဒါပေမယ့် မမရယ် ဆရာချစ်ဦးညိုကြောင့်တော့ ဒဿက ဟီးရိုးဖြစ်ခဲ့သေးတာပဲ ပြီးတော့ ကိုရုပ်ဆိုးရဲ့နူးညံ့တဲ့ အချစ်နဲ့ ဒဿနဲ့ကြမ်းတမ်းပြင်းပြတဲ့ ပိုင်ဆိုင်လိုမှု ဒါတွေက အချစ်ကို စည်းခြားပေးသွားတာပဲ လို့ မွန်တော့ထင်မိတယ် ကြွက်ဂိုဏ်းချုပ်က ဂူအောင်းပြီး အတွေးတွေမြူးနေတာကိုး ခုတော့သိသွားပြီး)
MhawSayar, on December 26, 2008 at 12:37 am said:
တစ်မျိုးပါလား.ဒီတစ်ပုဒ်က 🙂 ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ ဒဿပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရာမပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုရုပ်ဆိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်. အချစ်နဲ့ တွေ့ရင်တော့ လစ်သွားတာပဲဗျ။ 😛
ပုံရိပ်, on December 26, 2008 at 1:20 am said:
ရုပ်ဆိုးတာချင်း အတူတူ သူ့ထိုက်နဲ့ သူ့ကံပေါ့လေ…။
nhn, on December 27, 2008 at 1:11 pm said:
လေးမရေ…ကောက်ချက်ဆွဲရင်း မီးပျက်လိုက်ပါတယ်ရှင် ဆိုတာလေး ကြိုက်တယ်ဗျာ….ကျန်းမာပါစေ…
nu-san, on December 27, 2008 at 2:17 pm said:
လေးမတွေးသလိုတော့ မတွေးမိဖူးဘူး.. အင်း.. ထင်တာရွှီးရရင် The beast က ကာတွန်းကားမှာ သူက ဇာတ်လိုက်၊ ဒဿကျတော့ ဇာတ်ရံလိုမျိုးဖြစ်နေတော့ နောက်ဆုံးမှာ ဇာတ်ရံတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာသာ မရတာပဲဖြစ်မယ်.. အဟီး.. ထင်တာ ပြောကြည့်တာပါ..သိပ်တော့ နားမလည်ဘူးရယ်….. မွှားတွားရင်တော့ ချောရီးနော်.. 😀
ဝေလေး, on December 27, 2008 at 2:32 pm said:
ဟုတ်တယ်နော် မမလေးမပြောသလိုပဲ… စာရေးဆရာပေါ်မူတည်မလား။ ဒါပေမယ့် ဆရာချစ်ဦးညိုရေးတဲ့ ဒဿဂီရိအကြောင်း ဖတ်ပြီးတော့လည်း သူ့ကိုသနားသွားပြန်ရော။ မှန်တာကတော့ လူ့လောကမှာ မင်းသားခေါင်းဆောင်းတဲ့ဘီလူးတွေများတယ်ဆိုတာပဲ… 😛 😛
နေ့အိပ်မက်, on December 28, 2008 at 3:54 am said:
နေရင်းထိုင်ရင်း ရှာတွေးတတ်တယ်နော်။ မိုက်တယ်။ ရှာရှာဖွေဖွေ အတွေးလေးက…။ နေ့အိပ်မက်က ဒဿရော၊ the beastရော မကြိုက်ဘူး။ လက္ခဏလိုလူမျိုးတွေပဲ ကြိုက်တာ…(ဘာမှလည်း ဆိုင်ဝူးနော်:P)
ShwunMi, on December 30, 2008 at 12:24 am said:
တကယ်တော့ ဒဿရော ရာမပါ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ ချစ်ချင်ကြတာပဲ။ The beast ကလည်း မင်းသားချော ဖြစ်လာသလား မဖြစ်လား အပြင်မှာတော့ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူး။
ဘီလူးတွေပဲ များနေတယ် ဆိုတာ ဟုတ်မှာ . . .
ညိမ်းညို, on December 30, 2008 at 9:46 pm said:
ဒါမှ အစ်မလေးမ အစစ် 🙂
ရှုထောင့်အသစ်ကနေ သူတွေးမိတာတွေ ရေးပြသွားရင်း ဖျတ်ခနဲမီးပျက်သွားပုံကလေးကဖြင့် သင်းပ 😛